Fitbit yatove kuzivisa kuti icharega kupa rutsigiro kuPebble | IPhone nhau
Fitbit yatove kuzivisa kuti icharega kutsigira Pebble
Mushure mekutengwa kwePebble naFitbit gore rapfuura 2016 -kupera kwegore iro- mucherechedzo pachawo wakayambira kuti ichatsungirira rutsigiro rwehunyanzvi kusvika 2018 uye hongu, 2018 yatosvika uye zvinoita sekunge iyo nhau haina kunaka kwazvo mune izvi varidzi veaya akangwara mawatch kuti kunyangwe chiri chokwadi vaive vasiri vekutanga kusvika pamusika, vaive vamwe veavouye ivo vakamutsiridza nyika ye smartwatch iine kuvhurwa kwayo paKickstarter crowdfunding chikuva.
Ikozvino mushure menguva ino zvinoita kunge Fitbit haizopindura zvakananga kutsigira izvi zvishandiso. Ichi chinhu chakange chatove chaziviswa uye kuti chirevo chekambani chasimbiswazve mune izvo zvinoonekwa izvo Vashandisi venguva yekutarisa vachasara vasina rutsigiro kubva muna Chikumi 30 wegore rino.
Zviripachena izvi hazvisi kuzosiya zvachose vashandisi vakarembera uye ndizvozvo iyo dombo revashandisi reTebble rakanyanya chaizvo, kugara kunze kwenhau kana mhinduro dzinogoneka kumatambudziko anoonekwa, asi zviri pachena kuti hazvizove chinhu chepamutemo uye izvi zvinogara zvisina kunaka mumatunhu mazhinji.
Pasina rutsigiro rwepamutemo hazvireve kuti iko kumagumo
Ichi chinhu icho vashandisi vazhinji vanogara vachifunga kana kutsigirwa kwechigadzirwa kuchipera zviri pamutemo asi hapana chiri kumberi kubva pachokwadi. Hongu, ichokwadi kuti iyi sutu yakakosha munzira dzakasiyana asi hazvireve kuti iyo Masiginecha mawatch akatengwa naFitbit amira kushanda nekukurumidza manje.
Dambudziko guru rinogona kusangana nevashandisi veTebble kuenderana kwekuenderana kwekushandisa pamwe nevashandisi veaya mawachi ne iPhone kana Android zvishandisoseyekuvandudza kune Apple's inoshanda sisitimu inogona kukonzera kuti irege kushanda. Zvese izvi zvakaziviswa uye vazhinji veava vashandisi vePebble watches vakachinjira kuApple Watch, pavakaona iyo Fitbit kufamba. Ndinovimba matambudziko aya chaiwo anogona kugadziriswa neshanduro nyowani kana yakafanana, tichaona kana ndiwo magumo nekufamba kwenguva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Fitbit yatove kuzivisa kuti icharega kutsigira Pebble
Vanhu veFitbit vakatenga hurungudo kungoita kuti mukwikwidzi abude munzira.
Vakabvarura kambani, vakaviga basa ravo, vakaremadza kugoverwa kweiyo Pebble Nguva modhi uye vakatsungirira rutsigiro chete nekuda kwekukosha kwepamutemo: paive nemawachi pasi pewarandi uye vaifanira kuvimbisa mashandiro avo.
Kana iwe waifanirwa kushuvira Fitbit chimwe chinhu?
Iyo inononoka, inoshungurudza slide kusvika pakubhuroka. Nenyonganiso.
Pindura ku incom2
Ndinonzwa rimwe nerimwe remashoko ako muchipfuva changu. Zvakandirwadza sei kuona kuti smartwatch yakanakisa yakambobhadhariswa uye kuderedzwa sei. Ndakange ndatenga prebble nguva 2. Uye kwandiri kwaive kurota, yaive wachi chaiyo, senge yangu nguva yedombo (yandinoshandisa izvozvi) asi yakavandudzwa munzira dzakawanda. Uye pandakaziva kuvhurwa kwakamiswa ... kufa kune fitbit.
Pindura kune Iddeal
iOS 11.3 uye tvOS 11.3 inopa rutsigiro rweAirPlay 2 ine yakawanda-kamuri basa
Iyo inotevera iPhone ine LCD skrini ichave nesarudzo yepamusoro kupfuura zvakajairwa